‘जात्रै जात्रा’बाट प्रदिपलाई सफलताको ह्याट्रिक गर्ने अवसर – दाङ खबर
‘जात्रै जात्रा’बाट प्रदिपलाई सफलताको ह्याट्रिक गर्ने अवसर
जेठ १ – लामो समय मह संचारमा अवाद्ध भएर काम गरेका निर्देशक प्रदिप भट्टराई आफ्नो तेश्रो प्रोजेक्ट ‘जात्रै जात्रा’ मार्फत दर्शकमाझ आउँदैछन् । जेठको ३ अर्थात शुक्रबारबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ उनका लागि ठूलो अवसर बनेर खडा हुँदैछ ।
प्रदिपले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र ‘जात्रा’ हिट भएको थियो । दोश्रो चलचित्र ‘शत्रु गते’ले बम्पर कारोबार नै गर्यो । प्रदिपले दुबै चलचित्रमा निर्देशकिय जादु छरेका थिए । उनै, भट्टराइको निर्देशनमा बनेको तेश्रो चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ दर्शकका लागि कौतुहल र उत्सुकतामा छ ।
विशेषगरि, चलचित्रको कमेडी शैली, कथावस्तु, पात्रहरुको अभिनय आदिले पनि दर्शकले यो चलचित्रलाई प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । ‘जात्रा’लाई दर्शकले सर्वाधिक रुचाएका कारण पनि यसको सिक्वेल प्रतिक्षामा हुनु स्वभाविक नै हो ।
अर्कोतिर, यो चलचित्र हिट भएको खण्डमा प्रदिपले सफल निर्देशनमा ह्याट्रिक समेत गर्नेछन् ।
लगातार, ३ चलचित्र हिट दिने निर्देशक निकै कम छन् । के प्रदिप भट्टराइको यो रेकर्ड राख्ने सफल निर्देशकको सूचीमा पर्लान् ? शुक्रबारबाट सबै कुरा चलचित्रले बोल्नेछ ।
Prevआज कति छ सुनचाँदीको भाउ ?
Nextयसरी दाँत सफा र चम्किलो बनाउनुहोस्
अञ्चल अस्पतालमा पुनः निमित्त मेसु
आज सुनको भाउ स्थीर, चाँदीको घट्यो